भूतहरूको कारणले हुने मानसिक रोगहरुको लागि आध्यात्मिक उपचार
सार : हामीलाई थाहा छ कि मानसिक रोगको लक्षण जैविक कारकको साथै मनोवैज्ञानिक कारणले हुन्छ । तर हामी मध्ये धेरै जसो व्यक्तिलाई थाहा छैन कि धेरै अवस्थाहरुमा,
हाम्रो मानसिक रोगको लक्षणहरुको पहिलो कारण आध्यात्मिक कारकहरु हुन् या
भएको रोगलाई अवक्षेपण (precipitate) या अधिक बढाउनुमा (aggravate) आध्यात्मिक कारकको ठूलो हात हुन्छ, या
आध्यात्मिक कारकहरू जिम्मेवार हुन्छन् जब बिरामी प्रयाप्त उपचार हुँदा पनि कुनै प्रतिक्रिया देखाउदैनन् ।
यस लेखमा हामी आध्यात्मिक कारक, अर्थात् भूत (प्रेतहरु, शैतानहरु, नकारात्मक उर्जाहरु आदि) को कारण हुने मानसिक रोगहरुको आध्यात्मिक अनुसन्धान साथै सम्बन्धित आध्यात्मिक उपचारहरु प्रस्तुत गरेका छौं ।
यो कुनै पनि हिसाबले मानसिक रोगहरुको लागि सबै लक्षणहरूको पूर्ण थिसिस होईन तर यसको उद्देश्य अवधारणा दिनको लागि हो; भूतहरुको कारण हुने विभिन्न लक्षणहरु कस्तो हुन्छन् र आध्यात्मिक अनुसन्धानको डाटा को उपयोग गरेर आध्यात्मिक उपचार उपनाएर कसरी ठीक हुन सकिन्छ ।
SSRF ले पारम्परिक चिकित्सा उपचारलाई निरन्तरता दिदै शारीरिक र मानसिक रोगहरूको उपचारको लागि आध्यात्मिक उपचार अपनाउनको लागि सल्लाह दिन्छ ।
पाठकहरूलाई कुनै पनि आध्यात्मिक उपचारको उपाय सुरु गर्नको लागि आफ्नो विवेक अपनाउन सल्लाह दिन्छ ।
२. मानसिक रोगहरुको मूल सूक्ष्म कारणहरू र आध्यात्मिक उपचारहरू के हुन् ?
३. भूतहरूले गर्दा हुने मानसिक रोगहरु
३.१ हामी कसरी थाहा पाउन सक्छौं कि हाम्रो लक्षणहरू भूतले गर्दा भएका हो ?
४. चार्टको व्याख्या र यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने
४.१ कति लामो समय सम्म नामजप गर्नुपर्छ ?
४.२ कुन उपाय प्रयोग गर्नुपर्छ ?
४.३ के जन्मेको धर्म अनुसार नामजप र भगवान दत्ताको नामजप जारी राख्नुपर्छ ?
४.४ के हामीले चिकित्सकिय उपचार जारी राख्नु पर्छ ?
४.५ नामजपबाट फाइदा लिनको लागि के नामजपमा श्रद्धा हुनु पर्छ ?
५. भूतहरूले गर्दा हुने मानसिक रोगहरूको उपचारको तालिका
हामी सबैले कुनै न कुनै प्रकारले मानसिक गडबडी अनुभव गरेका छौं । यो चिन्ता जस्तो समान्य लक्षण या डिप्रेसन, आत्महत्याको विचार या स्किजोफ्रेनिया जस्तो गम्भीर रुपको हुन सक्छ । जीवनको कठिनाइहरूको खण्डमा हामीले वर्णन गरेका छौं कि जीवनमा समस्याहरूको मूल कारण (स्वास्थ्य समस्याहरू समावेश गरेका छौं) शारीरिक, मनोवैज्ञानिक र आध्यात्मिक हुन सक्छन् । आधुनिक चिकित्सा विज्ञानले मानसिक रोगहरूको केवल शारीरिक र मनोवैज्ञानिक करणहरु उजागर गरेका छन् ।
माथिको चार्टले हाम्रो जीवनको समस्या र कठिनाईहरूको मूल कारणको औसत विश्लेषण दिन्छ । आध्यात्मिक अनुसन्धानले संकेत गर्छ कि जीवनको ८० % समस्याहरू आध्यात्मिक आयाममा हुन्छ । यो ध्यान दिन महत्त्वपूर्ण छ कि कुनै पनि मानसिक रोगको शारीरिक, मनोवैज्ञानिक या आध्यात्मिक आयाममा मूल कारणको अनुपात हुन सक्छ र तिनीहरु परस्पर विशेष होईन्न् ।
हाम्रो जीवनको विशिष्ट समस्याको आध्यात्मिक मूल कारणहरुको पूर्ण विवरण “जीवनको समस्याहरुका मूल आध्यात्मिक कारण“ लेखमा दिएको छ ।
विभिन्न आध्यात्मिक कारणहरू मध्ये कुनै पनि एउटा कारणले गर्दा व्यक्ति मानसिक अशान्तिबाट पीडित हुन सक्छ । उदाहरणको लागी, आत्महत्याको विचार सम्बन्ध विच्छेदको परिणामस्वरूप हुन सक्छ जुन स्वाधिष्ठान चक्र मा भूतद्वारा उत्पन्न दुर्बलताको कारण हुन सक्छ । रोगहरु जुन आध्यात्मिक मूल कारणले हुन्छ त्यसता रोगहरु विशिष्ट आध्यात्मिक उपचारहरूद्वारा मात्र ठिक हुन सकिन्छ । आध्यात्मिक कारणको चिन्ता नगरि, आध्यात्मिक अभ्यासको ६ आधारभूत विश्वव्यापी सिद्धान्तहरू अनुसार साधनाको जग बसालेमा विशिष्ट आध्यात्मिक उपचार छिटो काम गर्नुको साथै अधिक प्रभावी हुन मद्दत गर्दछ ।
यस लेखमा, हामीले आध्यात्मिक उपचारहरूमा केन्द्रित गरेका छौं जसले लक्षणहरूलाई कम गर्न मद्दत गर्दछ, जसको मूल आध्यात्मिक कारण भूतहरू (प्रेतहरू, शैतानहरू, नकारात्मक उर्जाहरू आदि) को कारणले हुन्छन् ।
हामी त्यही स्त्रीको उदाहरणमा जाऔं जो जागिर गुमेको कारण चिन्तित छ । यदि भूतले ७० % मानसिक चिन्तामा योगदान गरिरहेको छ भने, यस लेखमा दिएको आध्यात्मिक उपचारहरू प्रयोग गरेर, उनीले केही हदसम्म राहत पाउन सक्छिन् ।
वर्तमान कालमा संसारमा प्रायः सबैजना कुनै न कुनै तरिकाबाट भूतहरूद्वारा प्रभावित छन् (प्रेतहरू, शैतानहरू, नकारात्मक उर्जाहरू, आदि) । थप विवरणको लागि खण्ड भूतहरु हेर्नुहोस् । भूतहरुले आफ्नो कालो ऊर्जाको माध्यमबाट विभिन्न स्तरहरुमा मस्तिष्कको कार्यलाई बिगारेर मानसिक बिरामीको कुनै पनि लक्षणको कारण बन्न सक्छ । भूतहरु आफ्नो कालो ऊर्जाको हतियार प्रयोग गरेर कुनै पनि मानसिक लक्षण वा बिमार स्वास्थको नक्कल गर्न सक्छन् । हाम्रो मृत पूर्खाहरुको सूक्ष्म शरीरहरु पनि यो श्रेणीमा समावेश हुन्छन् ।
केवल सन्तहरुले मात्र उनीहरूको अत्यधिक सक्रिय छैठौं इन्द्रियको सहायताले निदान गर्न सक्छन् की निश्चित लक्षणहरु भूतले गर्दा भएको हो कि होइन । उनीहरूले हामीलाई आक्रमण गर्ने भूतको विवरण, आक्रमण गर्नुको कारण, सटीक उपाय आदि पनि बताउन सक्नुहुन्छन् । थप विवरणहरूको लागि, कृपया “छैठौं इन्द्रियको क्षमताद्वारा हामी कति गहिराईमा अलौकिक गतिविधिहरु बुझ्न सक्छौं“ लेख पढ्नुहोस् ।
सक्रिय छैठौं इन्द्रिय भएको साधकले पनि केहि स्तरसम्म पत्ता लगाउन सक्छन् कि लाक्षण भूतहरुको कारणले भएको हो या होइन । तर उनीहरू १००% निश्चित हुन सक्दैनन् र आक्रमणको प्रकृतिको बारेमा धेरै विवरणहरू पनि थाहा हुँदैन्न् ।
हामी मध्य बाकी मानिसहरु जोसँग छैठौं इन्द्रिय (ESP) को क्षमता छैन उनीहरुले लक्षणहरु भूतको कारणले भएको हो भनेर कसरी थाहा पाउने ? यसको लागि एउटा साधारण नियम छ जुन हामी प्रयोग गर्न सक्दछौं, कुनै पनि निर्णय गर्नको लागि, जसमा हामीले आफ्नो बौद्धिकता प्रयोग गर्नु पर्छ । हामी थाहा पाउन सक्छौं कि लक्षणहरू भूतको कारणले भएको हो यदि :
नियमित, पारम्परिक औषधीले ठिक हुँदैन,
पूर्णिमा या औंसीको दिनमा लक्षणहरु बढ्नु
आध्यात्मिक उपचारबाट ठिक हुनु
उदाहरणको लागी, यदि व्यक्ति बिना कारण चिन्ता अनुभव गर्दछ र परम्परागत औषधिद्वारा ठिक हुँदैन भने भूतको कारण हुन सक्छ ।
यद्यपि मूल कारण शारीरिक/मनोवैज्ञानिक या आध्यात्मिक (भूत बाहेक) हुन् भने, हाम्रो सुझाव छ कि चिकित्सा उपचारको साथ-साथ तल उल्लेख गरेको आध्यात्मिक उपचार अपनाउनुहोस् । यसको कारण यो हो कि भूतहरूले मानसिक रोगको कारण हुने कम्जोरीपनको लाभ उठाएर व्यक्तिलाई आक्रमण गरि समस्यालाई बढाउँछ । तसर्थ, एउटा रोग जुन शुद्ध मनोवैज्ञानिक रोगको रूपमा शुरू भए पनि धेरै जसो अवस्थामा भूतहरूले आक्रमण गरेपछि समस्यालाई जटिल बनाइ दिन्छन् ।
निम्नलिखित चार्टमा क्रोध, उदासीनता, नकारात्मक सोचाइ, चिन्ता र रक्सी मन पर्ने जस्ता स्वाभाबदोषहरु भएको व्यक्तिको पाश्र्वचित्र देखाउँदछ । भूतले अनुचित लाभ उठाएर नकारात्मक सोचको तिव्रता बढाई दिन्छ । यसले अन्य दोषहरु जस्तै उदासीनता, स्क्सी मनपर्ने आदिमा लहर सम्मान प्रभाव पार्दछ । कहिले काहि स्वाभावदोषलाई चरम सिमामा पुराई दिन्छ, यदि व्यक्तिमा आत्मा हत्याको विचार छ भने वास्तवमा गर्न सक्छ जब आत्महत्याको विचारको तिव्रता चरम सिमासम्म भूतद्वारा बढाई दिन्छ ।
चार्टको स्पष्टीकरणको लागि कृपया मानसिक रोगहरूको लागि आध्यात्मिक उपचारक नामजपहरुको सन्दर्भ लिनुहोस् ।
आध्यात्मिक उपचार नामजप खण्डमा पाँच प्यारामिटरहरू प्रदान गरिएको छ :
१. लक्षण : यसको अर्थ हो की व्यक्ति एउटा लक्षणबाट पीडित छ र त्यो भूतले गर्दा भएको हो, उदाहरणको लागि चिन्ता, डरलाग्दो सपनाहरु, मानसिक चिन्ता आदि । हामीले हाम्रा पाठकहरूलाई सजिलो होस् भनेर रोगको सट्टा लक्षणहरू दिएका छौं ।
२. यो कुनै पनि हिसाबले सबै मानसिक रोगहरूमा पूर्ण शोध प्रबन्ध होईन तर यसले कसरी विभिन्न लक्षणहरू भूतहरूको कारणले गर्दा हुन्छन् र कसरी आध्यात्मिक अनुसन्धानको तथ्याड़क प्रयोग गरेर आध्यात्मिक उपचारद्वारा कसरी त्यसलाई निको पार्न सकिन्छ भन्ने कुराको कल्पना दिने उद्देश्य हो ।
३. पञ्चतत्वको स्तर : यस स्तम्भले हामीलाई बताउँछ कि कुन पञ्चतत्तवहरुले प्रभावित छन् जसले गर्दा यी विशेष लक्षणहरु देखा परेको हुन् । चिकित्सा विज्ञानको प्रचलित प्रणाली जुन हामी सबैलाई थाहा छ त्यसले मस्तिष्कको कुन न्यूरो ट्रान्समिटर प्रभावित छ भनेर जान्नमा सीमित छ । यहाँ विज्ञान कोषको जैविक या भौतिक-जैविक रसायनिक स्तरमा मात्र पुगेको छ ।
भारतको पुरातन चिकित्सा विज्ञान, आयुर्वेद, कुनै रोग या अराजकको निदान गर्दा धेरै गहिरो सम्म जान्छ । यो प्रोटोन, न्यूट्रन, मेसन, ग्लुओन्स र क्वार्क्सको स्तर भन्दा पनि धेरै गहिराईसम्म जान्छ । यसले पञ्चतत्तवको स्तरमा निदान गर्दछ, जसले सम्पूर्ण सृष्टि बनेको छ । कृपया लेख मूलभूत पञ्चतत्तव के हुन् ? पढ्नुहोस् ।
कुन पञ्चतत्तवको कारण हामीलाई प्रभाव भएको हो भनेर जान्नु महत्त्वपूर्ण छ किन कि उपचार त्यहि स्तरको हुनुपर्छ अथवा त्यो भन्दा उच्च पञ्चतत्त्वको हुनुपर्छ ।
तल केही आध्यात्मिक उपचारहरू दिएका छन् जुन पञ्चतत्तवसँग सम्बन्धित निम्न स्तर देखि उच्च स्तरको क्रममा छन् । सूक्ष्म पञ्चतत्तव मध्ये पृथ्वत्त्व सबैभन्दा कम र अमूर्त छ भने आकाशतत्तव सबैभन्दा सूक्ष्म (अमूर्त) र श्रेणीकरणमा सबैभन्दा उच्च स्थानमा छ ।
पृथ्वीतत्तव इत्रको उपाय
आपतत्तव पवित्र जलको सेवन, नुन पानीको उपचार
तेजतत्तव पवित्र खरानी लगाउनु (विभूति)
वायुतत्तव पवित्र खरानी फुक्ने
आकाशतत्तव बक्स र आकाश उपाचार
हामी यी प्रत्येक उपायहरुको भविष्यमा आध्यात्मिक उपचार खण्डमा विस्तार गर्नेछौं ।
यदि यो लक्षणले हामीलाई पृथ्वीतत्तवको स्तरमा असर गरेको भए र यदि यो तल्लो श्रेणीको / शक्तिको भूतद्वारा गरिएको छ भने या कष्ट हल्का छ भने हामी इत्र प्रयोग गरेर आध्यात्मिक उपचारको लाभ उठाउन सक्छौं, जुन आध्यात्मिक पृथ्वीतत्तव स्तरको आध्यात्मिक उपचार हो । तर यदि असर गर्ने भूत उच्च श्रेणीको छ अथवा आक्रमण गम्भीर छ भने हामीले नुन पानीको उपचार छनौट गर्नुपर्नेछ जुन आपतत्तवको स्तरमा कार्य गर्दछ । यदि लक्षण आकाशतत्तवको स्तरमा छ भने उपचार आकाशतत्तवको स्तरमा नै गरिन्छ ।
४. आध्यात्मिक ऊर्जा केन्द्र (चक्र) : व्यक्तिले न्यासको माध्यमद्वारा आध्यात्मिक ऊर्जा कता केन्द्रि गर्नुपर्छ भनेर व्याख्या गरिएको छ । कृपया लेख न्यास पढ्नुहोस् ।
हाम्रो शरीरमा सात अदृष्य या सूक्ष्म आध्यात्मिक उर्जा केन्द्रहरू छन् र निम्न रेखाचित्रले देखाउँदछ कि ती हाम्रो शारीरिक शरीरको सम्बन्धमा कहाँ अवस्थित छन् ।
न्यास लाई त्यो ठाउँमा राख्नुपर्छ जहाँ आध्यात्मिक उर्जालाई केन्द्रित गर्नुपर्छ । यसको लागि हातको औंलाहरु जोडेर साथ-साथै भगवानको नामजप गर्नुपर्छ । उदाहरणको लागी यदि हामीले न्यास आज्ञाचक्रमा गर्नपर्छ भने तलको चित्रमा देखाएको अनुसार गर्नुपर्छ ।
न्यासको कार्य विधि
न्यास जहिले पनि नामजपको साथ गर्नुपर्छ । नामजप गर्दा हामी जुन भगवानको नामजप गर्छौं त्यहि भगवानको ईश्वरीय उर्जा ग्रहण गर्दछौं । न्यासको सहायताले हामी नामजपको माध्यमबाट प्राप्त ईश्वरीय उर्जालाई विशेष आध्यात्मिक उर्जा केन्द्रमा पठाउन सक्छौं । यस्तो गर्दा उर्जा त्यस क्षेत्रको अंगहरूमा फैलिनछन् ।
यदि एउटा विशेष लक्षणको लागि न्यास कता गर्नुपर्छ भनेर थाहा भएन भने हामी सामान्य नियमको रूपमा मानसिक गड़बडीको लागि एउटा हातको न्यास आज्ञाचक्र र अर्को हातको न्यास अनाहतचक्रमा राख्न सक्छौं ।
यदि तपाईको हात न्यान्स गर्ने क्रममा दुख्न थाल्यो भने हात तल ल्याएर केही समय आराम गर्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाई आफ्नो हात अर्को हातसँग अदल-बदल गर्न सक्नुहुन्छ ।
५. देवताको विशिष्ट नामजप : हामीले विभिन्न लक्षणहरूको लागि कुनै खास भूतलाई प्रतिरोध गर्नको लागि आवश्यक विशिष्ट आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त गर्नको लागि भगवानको एउटा विशेष पक्षको नामजप गर्नुपर्दछ । कहिलेकाँही विशिष्ट शक्ति (ऊर्जा) प्राप्त गर्नको लागि देवताहरु को दुई या दुई भन्दा अधिक पक्षहरुको संयोजनको नामहरुको जप विशिष्ट क्रममा गर्नुपर्दछ । हामीले दिएको अनुक्रममा नामहरू दोहोर्याउनु पर्छ र अनुक्रम पूरा गरेपछि त्यसलाई फेरि सुरु गर्नुपर्छ ।
हाम्रो पाठकहरूको फाइदाको लागि, हामीले विज्ञान अनुसार नामजपको अडियो बनाएका छौं । जुन व्यक्तिहरुको लागि यो नयाँ भाषा हो तिनीहरुले तलको चरणबद्ध तरिकाबाट उपचार गर्न सक्छन् ।
चरण १ : केवल ध्यानपूर्वक यसलाई सुन्नुहोस् र तपाईको आँखालाई प्रिन्ट गरेको नामजपमा राख्नुहोस् ।
चरण २ : अडियोसँगै जप भन्ने कोशिस गर्नुहोस् ।
चरण ३ : आफू एक्लौ भन्नुहोस् । यो चरणमा तपाई यसलाई ठूलो स्वरमा अथवा मन-मनै जहिले पनि मानसिक रूपमा खाली हुनुहुदा, जहाँ भएपनि वा जे गरिरहेको भएपनि दोहोर्याउन सक्नुहुन्छ । यदि सम्भव छ भने नामजप न्यासको साथ गर्नुहोस् । न्यास गर्न सम्भव छैन उदाहरणको लागि यदि तपाई रेलबाट कामको लागि यात्रा गरिरहनु भएको छ तब न्यास नगरि मन-मनै जप गर्नुहोस् । नामजपको प्रिन्टमा दृष्टी राखेर नामजप सुन्दा पनि केहि लाभ प्राप्त हुन्छ । तल दिईएको नामजपहरु तोकिएको नामजपहरु जस्तै हुन् जुन मानसिक रोगको लक्षणहरुको उपचार गर्नको लागि बनाएको हो । यी नामजपहरु गर्दा केवल रोगको लागी उपचारको रूपमा कार्य गर्दछ र आध्यात्मिक उन्नति हुँदैन ।
६. विशिष्ट संख्याको नामजप : यस स्तम्भमा, हामी एउटा वैकल्पिक उपचार प्रदान गरेका छौं जसलाई हामी संख्यात्मक नामजप भन्छौं । यदि कुनै कारणले ईश्वरको नाम दोहोर्याउन सकेन भने (किनकि तपाई नास्तिक हुनु हुन्छ या नामजपको शब्द उच्चारण गर्न गाह्रो लाग्छ) विशिष्ट संख्यात्मक नामजपको साथ-साथै न्यास गर्न सकिन्छ । यिनीहरु कसरी काम गर्छन् भनेर बुझ्नको लागि कृपया लेख संख्यात्मक नामजप पढ्नुहोस् ।
हामीले तपाईलाई ब्रैकेटमा नम्बर पनि प्रदान गरेकाछौं जुन केवल प्रत्येक अंकको जोड हो । यो तेर्सो प्रकारको नामजप तपाई न्यासको साथ गर्न सक्नुहुन्छ ।
संख्यात्मक नामजप सबैभन्दा प्रभावकारी हुन्छ जब संस्कृत भाषामा गरिन्छ किनकि संस्कृत भाषा सबैभन्दा सात्विक भाषा हो । यदि तपाईलाई बहु-अंक नम्बर उच्चारण गर्न गाह्रो लाग्छ भने, जस्तै १३१, तपाई नम्बर ५ लाई दोहोर्याउन सक्नुहुन्छ, जुन १३१ (१ + ३ + १ =५) सबै अंकहरू जोडेर प्राप्त गरिएको संख्या हो । तर तपाइँले पाउने लाभ यो प्रक्रियाद्वारा केहि कम हुनेछ ।
यदि तपाइँलाई संस्कृतमा संख्याको उच्चारण गर्न धेरै गाह्रो हुन्छ भने, तपाइँ यसलाई आफ्नै भाषामा पनि दोहोर्याउन सक्नुहुन्छ ।
यो सुझाव छ कि तपाईले यो उपचार दैनिक रुपमा गर्नुहोस् र यसको अवधि चै लक्षणहरुको गंभीरतामा निर्भर गर्दछ ।
हल्का कष्ट छ भने एकै पटकमा १-२ घण्टा नामजप गर्न सक्नुहुन्छ या धेरै पटक छोटो समयको गरेर दिनभरिमा १ देखि २ घण्टासम्म गर्न सक्नुहुन्छ ।
यदि लक्षणहरू मध्यम छन् भने ३-४ घण्टा या यो भन्दा पनि बढी गर्न आवश्यक पर्दछ ।
यदि गम्भीरता तीव्र छ भने कृपया दैनिक रूपमा जति सक्नुहुन्छ अधिक आध्यात्मिक उपचार गर्नुहोस् ।
लक्षणहरू हराइसके पछि पनि तपाईले २-४ महिनासम्म उपचार जारी राख्नुपर्दछ । जसरी एउटा मुख्य डिप्रेसनको उपचारमा एन्टी-डिप्रेसनन्ट क्याप्सुल लिदा, उदासीनता र रुन हराउनुको मतलब यो होइन कि बिरामीको रोग ठीक भयो । न्यूरो ट्रान्समिटरको असंतुलनले डिप्रेसन निम्त्याउछ र यसले दुखि हुने र रुने जारी रहन्छ । तसर्थ बिरामी उन्मूलनको लागि तोकिएको एन्टि-डिप्रेसनन्ट क्याप्सुल निर्धारित दिनको लागि जारी राख्नु आवश्यक हुन्छ । त्यसैले लक्षणहरू हराइसके पनि भूतको प्रभाव रहि रहन्छ त्यसैले पूर्णत: रोग निर्मूलन गर्नको लागि उपचार जारी राख्न आवश्यक हुन्छ ।.
तलको तालिकामा हामीले तीन उपचारहरूको विकल्प प्रदान गरेका छौं जसको तपाईंले लाभ लिन सक्नुहुनेछ । तलको तालिकाले प्रत्येक उपचारको तुलनात्मक प्रभावकारितालाई वर्णन गर्दछ । पञ्चतत्तव सिद्धान्त अनुरुपको उपचार अन्य उपचारहरूको लागि पूरक हुन्छ र चाँडो र अधिक पूर्ण उपचारको लागि कुनै पनि अन्य उपचारहरूलाई यसको साथमा गर्न सकिन्छ । तिनीहरू आफैंमा पनि लाभदायक हुन सक्दछन् यदि कष्ट हल्का छ या निम्नस्तर क्षेत्र भुर्वलोकको भूतबाट भएको हो । अन्यथा तिनीहरू नामजपको साथ सहायक उपचारको रूपमा कार्य गर्दछन् ।
देवताहरुको नामजप गर्नुहोस्
संख्यात्मक नामजपको अंक जोडेर आएको संख्याको नामजप
* यो प्रभावकारिता तब मात्र हुन सक्छ जब नामजप संस्कृतमा गरिन्छ
जारी राख्नुपर्छ, यदि हामीले साधनाको (आध्यात्मिक अभ्यासको) मूलभूत जारी राख्यौं भने लाभ अधिक र प्रारम्भिक हुन्छ । यदि दुबै गर्नको लागि सम्भव छैन भने प्राथमिक विशेष उपचारमा ध्यान केन्द्रित गर्न उत्तम हुन्छ । यस्तो किन हुन्छ भने सामान्यतया शारीरिक रोगको कारण साधनामा ध्यान केन्द्रित गर्न गाह्रो महसुस हुन्छ जसले या त व्यक्तिलाई चिडचिडा बनाइ दिन्छ अथवा व्यक्तिलाई विचलित या व्याकुल बनाइ दिन्छ ।
यदि व्यक्तिलाई यी लक्षणहरू भूतले गर्दा भएको महसुस गरे पनि, उनीहरूले आफ्नो चिकित्सकिय र मनोवैज्ञानिक उपचार जारी राख्नु पर्छ । यस्तो किन भने यसले हामीलाई कम्तिमा पनि लाक्षणिक राहत दिन्छ यदि यसको उपचार नभएपनि । हामीले हाम्रो विरल र अमूल्य आध्यात्मिक स्रोतलाई खेर फाल्नु हुँदैन जुन सजिलै उपलब्ध औषधीबाट गर्न सक्छौं ।
श्रद्धाले हामीलाई मद्दत गर्दछ, तर यो वेबसाइटमा दिएको कुनै पनि आध्यात्मिक उपायबाट बिना श्रद्धा पनि फाइदा लिन सक्छौं । यो बिना श्रद्धा पनि औषधीको फाइदा प्राप्त भएको जस्तै हो । त्यस्तै, यो एउटा आध्यात्मिक औषधि हो र व्यक्तिको यसमाथि श्रद्धा भए या नभए पनि यसलाई व्यवहारमा कृति गर्नाले यसबाट फाइदा लिन सकिन्छ ।
आध्यात्मिक उपचारको नामजप हेर्न कृपया यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।
निको पार्ने नामजप